လူထုသဘောထားအမြင်စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း(ဒေးဒရဲမြို့နယ်/ကျေးရွာ) – Than Lwin
သံလွင်နိုင်ငံသားစွမ်းရည်မြှင့်အဖွဲ့ကစီစဉ်သည့် ကောင်းမွန်သောဒေသန္တရစီမံအုပ်ချုပ်မှုတွင် နိုင်ငံသားများပူးပေါင်းပါဝင်မှုအခန်းကဏ္ဍမြှင့်တင်ရေးစီိမံချက်(ဖျာပုံခရိုင်/ ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀)အဖြစ် ဒေးဒရဲမြို့နယ်၊ ဥတိုကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ ကျိုက်လတ်ကလေးကျေးရွာ၊ ဆူးကလပ်ချောင်းဝကျေးရွာနှင့် ဥတိုရွာမကျေးရွာသို့(၇-၈ ရက်၊ ဇန်နဝါရီလ၊ ၂၀၂၀)ရက်နေ့များတွင်လည်းကောင်း၊
ကျုံဒူးဒါးမလိမ်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ ညောင်ကားယားကျေးရွာ၊ အောက်ကွင်းကျေးရွာနှင့် ကျုံဒူးဒါးမလိ််မ်းရွာမ ကျေးရွာများသို့ (၉ -၁၀ ရက်၊ ဇန်နဝါရီလ၊ ၂၀၂၀) ရက်နေ့များတွင်လည်းကောင်း၊
ဂွကလေးကျေးရွာအုပ်စု အတွင်းရှိ ရှမ်းစုကျေးရွာ၊ ပျော်ဘွယ်စုကျေးရွာနှင့် ဂွကလေးရွာမကျေးရွာများသို့ (၁၀ – ၁၁ ရက်၊ ဇန်နဝါရီလ၊ ၂၀၂၀) ရက်နေ့များတွင်လည်းကောင်း၊
လူထုသဘောထားအမြင်စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းအစီအစဉ်ကို ( ၇. ၁. ၂၀၂၀ မှ ၁၂. ၁. ၂၀၂၀၊ ထိ ) ၆ ရက်တာဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
၎င်း စစ်တမ်းကို ဖျာပုံခရိုင်အတွင်းရှိမြို့နယ်များဖြစ်သော ကျိုက်လတ်၊ ဘိုကလေး၊ဒေးဒရဲနှင့် ဖျာပုံမြို့နယ်များအတွင်းရှိ ကျေးရွာများနှင့် မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်များတွင် ကောက်ယူပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
ယခုစစ်တမ်းကိုကောက်ယူရာတွင် ဖျာပုံခရိုင်အတွင်းရှိ ရေလုပ်သားဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ဝင်များ၊ အလင်းတန်းအဖွဲ့(ဘိုကလေး)၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့(ဘိုကလေး)၊ ရောင်နီဦးအမျိုးသမီးဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့(ကျိုက်လတ်)၊ ဒေးဒရဲ့ကြက်ခြေနီအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဒေသခံများ ကတက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီပေးခဲ့ကြပါသည်။
သံလြင္ႏုိင္ငံသားစြမ္းရည္ျမွင့္အဖြဲ႕ကစီစဥ္သည့္ ေကာင္းမြန္ေသာေဒသႏၱရစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ႏုိင္ငံသားမ်ားပူးေပါင္းပါ၀င္မႈအခန္းက႑ျမွင့္တင္ေရးစီိမံခ်က္(ဖ်ာပုံခရုိင္/ ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀)အျဖစ္ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္၊ ဥတုိေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ က်ဳိက္လတ္ကေလးေက်းရြာ၊ ဆူးကလပ္ေခ်ာင္း၀ေက်းရြာႏွင့္ ဥတုိရြာမေက်းရြာသို႔(၇-၈ ရက္၊ ဇန္န၀ါရီလ၊ ၂၀၂၀)ရက္ေန႔မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊
က်ဳံဒူးဒါးမလိမ္းေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ ေညာင္ကားယားေက်းရြာ၊ ေအာက္ကြင္းေက်းရြာႏွင့္ က်ဳံဒူးဒါးမလိ္္မ္းရြာမ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ (၉ -၁၀ ရက္၊ ဇန္န၀ါရီလ၊ ၂၀၂၀) ရက္ေန႔မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊
ဂြကေလးေက်းရြာအုပ္စု အတြင္းရွိ ရွမ္းစုေက်းရြာ၊ ေပ်ာ္ဘြယ္စုေက်းရြာႏွင့္ ဂြကေလးရြာမေက်းရြာမ်ားသုိ႔ (၁၀ – ၁၁ ရက္၊ ဇန္န၀ါရီလ၊ ၂၀၂၀) ရက္ေန႔မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊
လူထုသေဘာထားအျမင္စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းအစီအစဥ္ကို ( ၇. ၁. ၂၀၂၀ မွ ၁၂. ၁. ၂၀၂၀၊ ထိ ) ၆ ရက္တာေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
၎ စစ္တမ္းကို ဖ်ာပုံခရုိင္အတြင္းရွိၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္ေသာ က်ဳိက္လတ္၊ ဘုိကေလး၊ေဒးဒရဲႏွင့္ ဖ်ာပုံၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ေကာက္ယူၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။
ယခုစစ္တမ္းကိုေကာက္ယူရာတြင္ ဖ်ာပုံခရုိင္အတြင္းရွိ ေရလုပ္သားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ အလင္းတန္းအဖြဲ႔(ဘုိကေလး)၊ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔(ဘုိကေလး)၊ ေရာင္နီဦးအမ်ဳိးသမီးဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔(က်ဳိက္လတ္)၊ ေဒးဒရဲ႕ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ား ကတက္ႀကြစြာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ကူညီေပးခဲ့ၾကပါသည္။
Previous Post: လူထုသဘောထားအမြင်စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းဖျာပုံမြို့နယ်/ကျေးရွာ(19- 24. Dec,2019)
Next Post: ရပ်ကွက်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်ပြည်သူတို့၏သဘောထားအမြင် စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲ (ဘိုကလေးမြို့နယ်/ ၃၀ . ၁. ၂၀၂၀)